Xildhibaan Sakariye: Sanadka 2020ka hadii dalka doorasho ka dhici weyso in leys dilo ayaa ka dhici doonto – Kalfadhi
Xildhibaan Sakariye Maxamuud Cabdi oo ah Gudoomiyaha Xidbi Siyaasadeedka Garsoor ayaa sheegay in aysan muuqan wadadii saxda ahayd ee lagu gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka dhacda sanadka 2020ka, Waxa uuna xusay in ay jiraan caqabado xoogan oo hortaagan in dalkaan ay ka dhacdo doorasho dadweyne.
Xildhibaan Sakariye ayaa sheegay in aysan muuqaan diyaar-garow iyo u dabacsanaan doorasho oo dalkaan ka dhacda markii loo eego sida ay wax ku socdaan iyo waqtiga ka harsan doorashada Soomaaliya. Xiligaan oo kale ayuu sheegay iney aheyd in la cadeeyo doorashada dhaceyso iyo qaabka ay ku dhici karto balse ilaa hada aysan muuqan rajadaasi.
“Waa la sheegaa iney doorasho dhacayso laakiin dariiqii lagu tagi lahaa waxaa hortaagan caqabado waa wayn iyo diyaar-garow la’aan “ayuu yiri Xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
“Sida aan u socono waa socodka Dii-diinka, waa loogu talagalay in dalkaan aysan doorasho ka dhicin qof kasta kursiga ayaa dan ugu jirtaa”, ayuu yiri Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo warbaahinta la hadlay.
Guddoomiyaha Xisbiga Garsoor Xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji ayaa sheegay in ay qatar badan ka imaan doonto hadii aysan dhicin doorasho xalaal ah madaama laga gudbay in loo kala safto ama lays ku dilo qabiil sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu hogaanka Soomaaliya ka dalbaday iney ka soo baxaan balantii ay qaadeyn ee aheyd in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah sanadka 2020ka.
“Waa dhamaatay in qabiil laysku dilo laakiin hadii la qaldo qaabka siyaasadda Soomaaliya Allaha u naxariisto” ayuu yiri Xildhibaan Sakariye.
Xildhibaanka ayaa dusha kaga tuuray qalad kasta iyo dib u dhac ku yimaada doorashadda Soomaaliya ee sanadka 2020ka hogaanka Soomaaliya ee hada talada haayo. “masuuliyadda lama wada-lahan, hogaanka maanta jira ayaa leh iyo cid kasta oo ku lug leh qabsoomidda doorashada”, ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.